I-WZX-Kutheni inxiba i-Sleam ye-SweidWear Itanki ye-Shaper Sheet
Kutheni unxiba itayi ye-senking ye-senk ye-sunk ye-sharper yomzimba?
NylonItanki le-Slowear ephezulu Ngokuphefumla kakuhle kunye nokufumana i-wiksi yokufuma. Kukho izitayile ezahlukeneyo zetanki le-tanki, ezinjenge-bist-busfear itanki, i-wireless Felves, i-seline ye-Wireless Felves, i-selisole ye-Sweewer enezitayile ezakhiwe nge-Bra kunye nezohlukeneyo zisebenzela iinjongo ezahlukeneyo.
Itanki ebalulekileyo ye-tanki ye-benking ephezulu sisiqwenga esiphambili sokunxiba okanye sodwa.
Ayisiyiyo kuphela itanki le-selfwear ephezulu ukuba inxibe ngokwayo, njengeyona cayimole yemihla ngemihla, kodwa iyasebenza ngakumbi kune-vest yemihla ngemihla, itanki yentsimbi encedayo
Itanki le-Slowwear Itanki i-tummy yolawulo kwaye yenze i-waistline kwaye yenza kube lula ukuba abafazi banxibe iimpahla zabasetyhini ezintle.
Itanki yemfuyo yemfuyo inokuthi ichaphazele ngokuthe ngqo njengeyona mihla le mihla kwaye inendlela i-4 yolule kakhulu kwaye ayibopheli.
Yenziwe nge-nylon ephezulu kunye ne-spandex, ayizizo izinto zobushushu behlobo.
Unokukhetha ukwenzela iMveliso yakho yeMilowweear eneempungutye ezisebenzayo kwaye wongeza ii-sarns zeyarns ukunika iimveliso zakho ze-FALWEAR.
Ukuba ufuna itanki yakho yentsimbi ephezulu ukuze inxitywe lonke ixesha elide, konke okudingayo yi-nylon kunye ne-spandex kunye netanki ye-Spander kunye ne-Tank ephezulu kwaye ibumba i-thenk the the thes yomzimba xa ubusika buza kuvela.
Abafazi be-Pleyswear Cai kunye ne-bra ebonisa i-brp engakhange ichaphazele i-sharper ye-sharper inika i-sharper yomzimba inika i-suble i-super i-super i-hugs ivakala imangalisa ngelixa ijonge ukumangalisa ngelixa ujonge ukutsalwa.
Umvelisi we-wzx we-wzx sellere ngumzi-mveliso wemilowa kwi-china oxhasa ukuzaliswa kwazo zonke iintlobo zentsimbi. Sivelisa izixhobo ezisemgangathweni ezisemgangathweni eziphezulu eziphefumlayo, zikhululekile, kwaye zizolula kakhulu.
Ngolwazi oluthe kratya nceda uqhagamshelane nathi
Umenzi weeMpahla Shapewear Camisole Umzi-mveliso we-sellhear
YANGAPHAMBILI WZX engenan- vavanuna va engenan- sangaphantsi Man Clothing
Isebenza njani i-senzere kwaye kutheni i-shaper yomzimba ingenamthungo ibhetele? OKULANDELAYO